ट्रम्प नाटो सदस्यसँग किन यति धेरै रिसाएका ?
काठमाडौं – ब्रसेल्समा चलिरहेको नाटो सम्मेलनमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले नाटो सदस्यहरूप्रति आक्रोश पोखेका छन् । नाटोका सदस्य मुलुकहरूले रक्षा खर्चमा सहयोग नबढाएको भन्दै उनले हकारेका हुन् ।
अझ ट्रम्पले त नाटो सदस्य मुलुकमध्ये विशाल देश जर्मनी आफैं रुसको अधीनमा रहेको समेत टिप्पणी गरे । जर्मनीले रुससँग पाइपलाइन डील गरेका कारण रुसको राज्यकोषका करोडौं डलर जम्मा भएको र जर्मनीलाई चाहिँ अमेरिकाले रक्षा गरिरहनुपरेको ट्रम्पले बताए ।
अघिल्लो वर्षको नाटो सम्मेलनमा पनि ट्रम्पले नाटो सदस्यहरूलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतलाई दुईगुणा बढाउन भनेका थिए । जुन देशले २ प्रतिशत त खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्, उसले ४ प्रतिशत कसरी खर्च गर्ला ?
नर्थ एटलान्टिक ट्रीटी अर्गनाइजेसन अर्थात् नाटोमा २९ सदस्य छन् । यो संगठन सन् १९४९ मा सोभियत संघलाई रोक्नका लागि गठन गरिएको थियो । यसको मुख्य कार्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा छ ।
सोभियत संघको विघटनपछि पनि यसलाई कायम राखियो र भूमिका परिवर्तन गरियो । यसले अहिले आतंकवादविरुद्धको लडाईं, छिमेकी देशमा स्थिरता र साइबर सुरक्षा लगायतमा काम गर्छ ।
नाटोका सबै सदस्यले आफ्नो जीडीपीको २ प्रतिशत रक्षा क्षेत्रमा दिनुपर्ने हुन्छ । तर यति रकम नदिने देशविरुद्ध कुनै दण्ड वा जरिवानाको व्यवस्था छैन ।
अमेरिकाले अहिले नाटोको कुल खर्चको २२ प्रतिशत बेहोर्छ । सन् २०१७ मा अमेरिकाले नाटोका लागि दुई अर्ब डलर खर्च गरेको थियो ।
सबै सदस्यले नाटोमा फन्डिङ गरेपनि २९ मध्ये आठ सदस्यले मात्र जीडीपीको दुई प्रतिशत दिने गरेका छन् । ट्रम्पलाई यी देश आफ्नो रक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त खर्च नगरेको र संकटबाट बच्नका लागि अमेरिकामा निर्भर रहेको लाग्छ ।
यति मात्र नभई ट्रम्पले यसलाई व्यापारसँग जोड्दै मंगलवार एक ट्वीट पनि गरे ः ‘युरोपेली संघले युरोपमा हाम्रा मजदूर, कर्मचारी र कम्पनीलाई व्यापार गर्न असम्भव बनाइदिएको छ । युरोपसँग अमेरिकाको व्यापार घाटा १५१ अर्ब डलर छ ।
अनि उनीहरू नै अमेरिकाले स्वेच्छाले उनीहरूको सुरक्षा गरोस् र शालीनतापूर्वक रक्षा खर्च पनि बेहोरोस् भन्ने चाहन्छन् । अब यस्तो चल्दैन ।’
ट्रम्पका अनुसार, युरोपको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी रक्षा क्षेत्रमा जीडीपीको जम्मा १.२४ प्रतिशत खर्च गर्छ र यो नाटो सहयोगीहरूका लागि निर्धारित मानकभन्दा निकै कम हो । अमेरिका भने जीडीपीको ३.५ प्रतिशत खर्च गर्छ ।